लघुकथा: हृदयघात| Nepal Pati
- सानू पौडेल
“तिमिलाई गाजल र लालि लगाएको कस्तो सुहाएको”!
“होर? होइन होला!”
“अनि त्यो केस छोड्दा त परिनै देखिएकी छौ”।
रोमा लजाएझैँ गरि तर भरतले भने उस्को तारिफ गरेर थाकेको थिएन। भरत बिबाहित पुरुष हो।उमेरले पैचालिस काटेपनि,केटी भने पछि उ हुरुक्कै हुन्थ्यो।पेशाले व्यापारी,न्युरोडमा निकै चलेको फेन्सी पसल थियो। सामान हरु प्राय बैंकक र कोरियाबाट आयात गर्थ्यो।गुणस्तरिय लुगा मुल्य मिलाएर दिने हुँदा उसको व्यापार चौगुना बढेको थियो। रोमा फाईनान्सबाट डेलि बचतको लागि पैसा उठाउन हिन्ने केटी थिई।निकै राम्री भएकोले भरत उसलाई आफ्नो बनाउन चाहान्थ्यो।रोमा पनि भरत को निकै करिब भैसकेकी थिई।
आफ्नो श्रीमान ले धेरै केटी को तारिफ गरेको सरिता ले बार बार सुनेकी थिई।एक्दिन उसलाई पनि रहर लागेर मेकप गरेर भरतसंग पसल जान ठीक्क परेकि थिई।भरत ले कड्किदै”स्वाईन प्वाई संग के विधि दलेको? मलाई यस्तो नक्कल पारेको मन पर्दैन।” भन्दै गाडी लिएर गयो।
साँझ घर फर्के पछि सुत्ने बेलामा सरिताले न्याउरो मुख लगाउँदै आफ्नो गुनासो पोखि। “म पनि पन्ध्र सोह्र बर्षमा धेरै राम्री थिएँ।दुनिया ले तारिफ गर्थे। सानैमा हजुरसंग बिहे भो बच्चा भए। उमेर ढल्कियो।जिन्दगी सधैँ एकनास कहाँ हुन्छ र?म त हजुर लाई सधँ माया गरेकी छु।सबै भन्दा राम्रो देख्छु हजुर ले किन….?
सरिता बोलि राखी उ रोमा को गहिरो प्रेम मा परेको थियो।सरिता ले जे भने पनि उस्को कुरा ले रति छुदैनथ्यो। एक दिन भरतले रोमालाई बिहे गर्न अनुरोध गर्यो।रोमा मन्जुर भै। दुबैले एउटा मन्दिर मा गएर बिहे गरे।सर्त मुताविक भरत ले आफ्नो सम्पुर्ण सम्पत्ति रोमाको नाउँमा गरिदियो र रोमा संग छुट्टै घरमा बस्न थाल्यो।यो कुरा सरिता लाई सुँईको सम्म थिएन। घरबाट सामान लिन बैंकक जान्छु भनेर निस्केको थियो।
एक दिन रोमा नुहाउदै थिई।उस्को मोबाईलमा बार बार फोन आयो।भरतले कतै घरकाले थाहा पाएर गरेकी भनी डराएर उठाएन।एक छिन मा म्यासेज आयो।”रोमा यत्रो पन्द्र दिन सम्म सँगै हुँदा पनि त्यो भरत लाई मार्न सकिनौ?आज राती उस्को परिवार लाई मार्नको लागि म मान्छे लिएर जाँदै छु।तिमी त्यसलाई आजै सिध्याई हाल अनि हामि मालामाल हुनु पर्छ।” त्यो म्यासेज पढ्दा पढ्दै भरत हृदयघात ले ढलिसकेको थियो।